တောင်ငူသား: အရံ / မင်္ဂလာဦးည
ရယ်ရတယ်နော်. ဓါတ်ပုံ ခွာဝေး လည်း ရှိသေးသလား။ (ခွာနီးကို နောက်ခေါ်တာ)
အင်း...ကြွားတာ ၂ ခါ ရှိပြီဟေ့...နော်..
"သြော်... အရံမင်္ဂလာဦးညပါတကား ".......အင်း..........က်ျိန်းတွေတော့ကျေကုန်လိမ့်မယ်နော်...
အရံမင်္ဂလာဦးည ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို အရင်ပြောင်းသင့်ပါတယ်. အရံသတိုးသားလုပ်တဲ့ည..တစ်ခုခုပေါ့။ ကြွားချင်ရင်လဲ စကားလုံးလေးနည်းနည်း ရွေးသုံးပေါ့ဗျာ.. ဗမာစကားက အများကြီးကျယ်ပြန်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား စဉ်းစာပါအုံး.. သူများတွေကို ဆရာကြီး ငပွကြီးလိုက်လုပ်နေတဲ့ ကိုယ်လူ ဒီတစ်ခါဘယ်လို ဖြစ်တာလဲဗျ...
အမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြော်ငြာသွားတာတော့ :P
ခွာဝေးတော့ မရှိလောက်ဘူးအမရ။ ဦးခွါနီးကတော့ ကိုဝဏ္ဏရဲ့ အဖေပါ။
မှတ်မှတ်ရရပေါ့ အကိုရာ။ ကုတင်ဘေးက ထိုင်ခုံလေးမှာ ငိုက်ရတာတဲ့။
ကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးအမရယ်။ လျှော့ဈေးနဲ့ ကြော်ငာဝင်ကြည့်တာပါး)
ကျွန်တော့်ကို သတိပေးသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် ဆင်ခြင်ပါ့မယ်ဗျာ။ ခုလိုထောက်ပြဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက် တကယ်ကျေးဇူးပါ။
အမက သဘောပေါက်တယ်။ ဒီလိုကြော်ငြာလို့မှ ရောင်းမထွက်ရင် နောက်တစ်ခေါက် ကံစမ်းမဲပါထည့်ရမယ် အမရေ
တိုးတိတ်ညင်သာသော စာဖတ်သူများအပါအဝင် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ပိုစ့်လေးကို သဘောကျသဗျ။ ရန်ကုန်မင်္ဂလာဆောင် (ကျွန်တော့်တူမလေးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်)ကိုသွားဖူးတယ်။ ဟိုတယ်တစ်ခုပဲ။ ခဏလေးနဲ့ ပြီးသွားတယ်။ ကုန်တာက သောက်သောက်လဲ။ စိတ်မှာတော့ နှမျောနေမိတယ်။
သြော... ချောမောကြောင်းကို မသိမသာလေး ကြော်ငြာဝင်သွားတာကိုး... သက်သေခံအဖြစ် ဓါတ်ပုံလေးပါ ထည့်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး...
ရန်ကုန်မင်္ဂလာဆောင်တွေကတော့ အဲလိုချည်းပါပဲ... တွေ့ဖူးသမျှ အဲလိုတွေချည်းပဲ... ဂုဏ်ဖော်ချင်ကြတာနဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေ ကုန်တာပဲ...
မင်္ဂလာဆောင် ၄-၅ ခုကို တက်ခဲ့ဖူးတယ်... အဲလိုတွေချည်းပဲလေ...